खुमबहादुर खड्काको घरमा मोस्टवान्टेड ? « मेचीखबर
खुमबहादुर खड्काको घरमा मोस्टवान्टेड ?
५ श्रावण २०७२, मंगलवार ०८:०८ मेचीखबर
काठमाण्डौ । नेपालगंजको व्यस्त बजारमा गत सोमबार एमाले कार्यकर्ता चेतना मानन्धरको खुकुरी प्रहार गरी हत्या भयो । प्रहरीले घटनामा संलग्न ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तर, मुख्य अभियुक्त गुण्डाका नाइके रिगल ढकाल अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
रिगलकै निर्देशनमा मानन्धरको हत्या भएको प्रहरीले बताएको छ । स्रोतका अनुसार रिगल कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काकै घरमा बस्दै आएकोले पक्राउ नपरेका हुन् । ढकाल खड्काका सबैभन्दा प्रिय नेता हुन् । डिल्लीबजार जेलमा हुँदा खड्काको सबै खर्च उनै ढकालले बेहोर्ने गर्दथे ।
खड्काकै संरक्षणमा उनले लामो समयदेखि गुण्डागर्दीबाट पैसा कमाउँदै आएका छन् । पैसाकै भरमा ढकाल कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापतिसमेत भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकोसमेत नाम बेचेर उनले विभिन्न व्यक्तिलाई धम्क्याएर पैसा असल्दै आएका थिए । मानन्धरलाई योजनावद्ध रुपमा काठमाडौंबाट गुण्डाहरु लगेर हत्या गरेको खुलेको छ । आजको दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ ।